प्रोटेष्ट तथा क्याथोलिक द्वन्द्वबाट जन्मेको देश बेल्जियम
(राजनैतिक आगत र विगत)
घटना र विचार, न्युज डेस्क !5months ago October 28, 2018
संसारमा देशहरूको जन्म र विघटन भइरहन्छ । दोश्रो विश्वयुद्ध अगाडि स्वतन्त्र देशहरू विघटन हुने प्रक्रिया तीव्र्र थियो भने ९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि केही नयाँ देशहरू जन्मिए । युगोस्लाभिया टुक्रिएर केही नयाँ देशहरू जन्मिए । ती देशमा नयाँ देश जन्मने प्रक्रिया देशको विभाजन थियो । त्यसमा आन्तरिक राजनैतिक संकट प्रमुख कारण भए पनि शक्ति राष्ट्रहरूको अरुलाई कमजोर बनाएर संसारमा आफ्नो राजनैतिक बर्चस्व कायम गर्ने सामरिक रणनीतिले समेत काम गरेको देखिन्छ । तर कतिपय देशहरू बलिया देशहरूको औपचारिक दासताविरुद्धको संघर्षबाट बनेका हुन् । भारत, पाकिस्तान, सिंगापुरलगायत धेरै देश यो श्रेणीमा पर्दछन् । त्यस्तै बेल्जियम पनि केही हदसम्म फ्रान्स, अष्ट्रिया र हल्याण्डको दासताको विरुद्ध जन्मेको देश हो । बेल्जियममा कुलीनतन्त्रको विरुद्धको संघर्ष र जातीय तथा धार्मिक औपनिवेशिकताविरुद्धको संघर्षको समान संयोजन थियो । जुन संघर्षले राजतन्त्रात्मक मुलुक बेल्जियमको जन्म गरायो । त्यसमा बेलायतलगायतका मुलुकहरूको फ्रान्सलाई दबाबमा राखिरहने सामरिक स्वार्थले पनि केही हदसम्म काम गरेको इतिहासकारहरूको राय देखिन्छ ।
बेल्जियम जन्मदाको परिवेश :
जतिबेला बेल्जियम अष्ट्रियाको एक प्रशासकीय इकाई थियो त्यतिबेला पनि बेल्जियमको मुख्य धर्म रोमन क्याथोलिक नै थियो । यिनीहरूले पोपलाई आफ्नो सर्वोत्तम धार्मिक आचार्य मान्दथे र उनका आदेशहरूलाई पालना गर्दथे । क्याथोलिक धर्मगुरु पोप इटालीको रोम शहरमा बस्थे । अगाडिदेखि नै क्याथोलिक धर्म फ्रान्स, स्पेन, इटाली, पोर्तुगल, आयरल्याण्ड , पोल्याण्ड , अस्ट्रिया र बेल्जियममा फैलिएको थियो ।
१८ जुन १८१५ ई. मा नेपोलियन बोनापार्टलाई रूस, अष्ट्रिया, प्रशा, इंगलैंडलगायतका फौजहरूले वाटरलुको लडाइमा हराएपछि भियनामा युरोपेली राष्ट्रहरूको सम्मेलन भयो । त्यो सम्मेलनले हलैण्डमा ओरेन्ज राजवंशको पुनर्स्थापना गरी बेल्जियमलाई हलैण्डमा गाभियो । हलैण्डका जनताहरू प्रोटेस्ट धर्म मान्दथे र त्यहाँको भाषा ट्युटोनिक ‘डच’ थियो । बेल्जिकहरू क्याथोलिकप्रति विश्वास गर्दथे र फ्लामिस भाषा बोल्थे । हलैण्ड फ्राँसलाई असाध्य घृणा गर्थ्यो भने बेल्जियम फेरी फ्रान्सको असल मित्र थियो । त्यति बेलाको आर्थिक परिवेशलाई हेर्दा हलैण्डले स्वतन्त्र ब्यापार नीति अँगालेको थियो भने बेल्जियमले संरक्षित ब्यापार गरिरहेको थियो । भियना सम्मेलनले यी दुइ भिन्न भाषिक तथा धार्मिक समुदायबीचको भिन्नतालाई उपेक्षा गरेको थियो । जसले गर्दा उनीहरूको धार्मिक तथा भाषिक भावनामा चोट पुगेको थियो । आर्थिक हितहरू पनि यी दुबैका एकअर्काका विपरीत थिए ।
अर्कोतिर १८३० इ. सम्म जनसंख्याको दृष्टिले बेल्जियम हलैण्डभन्दा दोब्बर ठुलो थियो । तापनि सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा बेल्जियमको एकजना सदस्य मात्र सामेल गराइएको थियो । हलैण्डका तत्कालीन राजा विलियम प्रथमले बेल्जियमप्रति अपमानित र विभेदकारी ब्यवहार देखाए । डच कानुनहरू लागु गरियो र डच अधिकारीहरूको भरमार नियुक्ति गरियो । बेल्जियमको व्यापारलाई समाप्त पार्न ज्यादा करहरू लगाइयो । ब्याक्तिगत अधिकार, प्रेस, सभा तथा लेखहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । बिद्यालयहरूमा प्रोटेस्ट धर्म गुरुहरू नियुक्त गरियो ।
यस्ता विभेदकारी कानुनहरू लागु गर्दै अन्तमा ट्युटोनिक ‘डच’ भाषालाई राष्ट्र भाषा बनाउने घोषणा गरेपछि बेल्जिकहरू आन्दोलित हुन थाले र राजा विलियम प्रथमसँग स्वशासनको माग गरे । राजाले त्यो मागलाई इन्कार गरिदिए । त्यसपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी शुरु भयो । त्यो आन्दोलनमा कुलीन तथा पादरीहरूको पनि साथ थियो ।
बेल्जिकहरूले हलैण्डको औपनिवेशिकताको विरुद्ध हतियार उठाउने निर्णय गरे । राजधानी ब्रसेलमा हजारौँ बेल्जिकहरूले हतियार उठाएर आफ्नो सैनिक संगठन निर्माण गरे । हजारौँ बेल्जिक सशस्त्र मुक्तिसेनाको छापामार कारवाही तथा खुल्ला आक्रमणलाई सहन नसकेर डच सेना रातारात भागे । हलैण्डले फेरि स्वतन्त्रता संग्रामलाई दबाउन हजारौँ डच सेना बेल्जियम पठायो । माटोको कसम खाएर हतियार उठाएका बेल्जिक मुक्ति सेनासँग हलैण्डको सेना हार्यो । त्यो स्वतन्त्रता संग्राममा बेल्जिकहरूको जित देखेर सम्पूर्ण युरोप आश्चर्य चकित भयो । त्यो स्वतन्त्रता संग्रामलाई वर्षको एकपटक Belgium War of Independence (1821-32) भनेर सम्मान गरिन्छ ।
बेल्जिकहरूले १८३० इ.मा संविधानसभाको निर्माण गर्दै स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गरे । त्यसको लगत्तै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गरियो । फ्रान्सका राजा लुई फिलीपका माइला छोरा ड्युक अफ नेमुरलाई बेल्जियमको राजासमेत बनाइयो । तात्कालिक बेलायतका प्रधानमन्त्री लर्ड पाल्मरसनले नेमुरलाई राजा बनाएकोमा कडा विरोध जनाए । उनी बेल्जियमलाई फ्रान्सको नियन्त्रणमा जान दिन कदापि चाहँदैनथे । त्यसैले बेलायतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका जर्मन राजकुमार लियोपोल्डलाई राजा बनाउन बेलायतले प्रस्ताव गर्यो । पुनः नेमुरलाई हटाइ जुलाई १८३१ इ.मा लियोपोल्डलाई बेल्जियमको राजगद्दीमा राखियो । त्यसै महिना युरोपका सबै राष्ट्रहरूको लण्डन सम्मेलनले बेल्जियमलाई एक स्वतन्त्र र तटस्थ राष्ट्रको मान्यता दियो ।
बेल्जियम अधिराज्यको जन्म भएपछि बेल्जिकहरू आफ्नो राजनैतिक निर्णयका आफै मालिक बने । उनीहरूले आफ्नो राजनैतिक आस्थाअनुशार संगठित हुन विभिन्न पार्टीहरू स्थापना गरे ।
इतिहासका विभिन्न राजनैतिक उतारचढावको सामना गर्दै बेल्जियम अहिलेको अति विकसित अवस्थामा आएको हो । सन् १९१४ देखि १८ सम्मको प्रथम विश्व युद्धमा आततायी शक्ति राष्ट्रहरूको साम्राज्यवादी होडबाजीको कारण पुनः बेल्जियमलाई तहसनहस बनाइयो । इपरलगायत बेल्जियमका विभिन्न ठाउँमा भएको नरसंहारलाई संसारले अहिलेसम्म भुल्न सकेको छैन ।
राजनैतिक धारहरू :
बेल्जियमको राजनैतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने बेल्जियमको विकासमा बेल्जियमका प्रगतिशील शक्तिहरूको ठुलो योगदान रहेको छ । चाहे त्यो मजदुर मुक्तिको सवालमा होस् वा महिलामुक्तिको सवालमा । आरोहअवरोहका दुई शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक इतिहासमा बेल्जियमका आर्थिक समुन्नति र विकासले यिनै शक्तिहरूको नेतृत्वमा अधिकतम सफलता प्राप्त गर्यो भन्न सकिन्छ ।
उग्र परम्पराबादी तथा दक्षिणपन्थी धारको पुनः उदय :
बेल्जियमको राजनीतिक दलहरू मुख्य रूपले दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो वर्गमा प्रगतिशील धारणा भएका राजनैतिक पार्टीहरू पर्दछन् । जुन पार्टीहरूले बेल्जियमको सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरे । ती दलहरू समाजको गति समयको गतिजस्तै सदैव परिवर्तनशील भएको स्विकार्छन् र आवश्यकताअनुसार यथास्थितिको अग्रगामी परिवर्तन चाहन्छन् वा त्यसको लागि नेतृत्व गर्दछन् । ती शक्ति प्रगतिशील शक्ति हुन् ।
त्यसको विपरीत समाजमा अर्को शक्ति पनि विद्यमान हुन्छ । त्यो शक्ति परम्परावादी कन्जरभेटिभ शक्ति हो । त्यो शक्तिले परिवर्तन चाहन्छ तर भाषिक, जातीय र धार्मिक घेराभित्रको । देशभन्दा क्षेत्रमा त्यसको रुचि हुन्छ, विज्ञान वा भौतिक प्रगतिभन्दा आफ्नो परम्परागत धर्म र भाषाप्रति उसको रुचि बढी हुन्छ । परिवर्तनको बाहक प्रयत्न भन्दा दैविक शक्तिलाई मान्दछ । त्यो वर्ग हमेसा आधारभुत वर्गको हितमा भन्दा सामान्त, दलाल वा धनी वर्गको हितलाई ध्यान राखेर आफ्ना नीतिहरू निर्माण गर्छ । बेल्जियममा त्यो वर्ग नोभेम्बर २४, १९९१ पछि आक्रामक हुँदै आएको छ । बेल्जियमका दक्षिणपन्थी कन्जरभेटिभ राजनैतिक दलहरूमा भ्लाम्स ब्लाङ्क, द न्यु भ्लाम्स अलाइन्स (NV-a), क्रिश्चियन डेमोक्रेटीस एण्ड भ्लाम्स (CD&V), सेन्ट्रल हुमेनिस्ट डेमोक्रेटिष्ट (cdH), रिफर्मिटिस मोभमेण्ट (MR) र भ्लाम्स लिबेरालेन एन डेमोक्रटन पर्दछन् । तर भीयलडिले आफूहरू स्वतन्त्र बजार नीति, आर्थिक उदारीकरण र प्रगतिशील सुधारको पक्षपाति भएकोले कन्जरभेटिभ नभएर न्युट्रल भएको दाबी गर्दछन् । दस्तावेज हेर्दा उनीहरूको रणनीति सत्ताको नेतृत्वमा नपुगुन्ज्याल नरम खालको कन्जरभेटिभ समाज स्थापना गर्ने, रोमन क्याथोलिक धर्मलाई सापेक्ष बनाउने र अनुदार पुँजीवादलाई स्थापित गर्ने देखिन्छ । आप्रवासीप्रति अनुदार देखिने त्यो शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दबाबको कारण आफ्नो फासिष्ट लक्षको घोषणा गर्न हिच्किचाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अनुकुल परिस्थिति आउने वित्तिकै आफ्नो रणनीतिमा अगाडी बढ्ने कुरालाई अस्विकार गर्न सकिन्न । युरोपमा त्यस्ता धरै नजिरहरू छन् ।
बेल्जियममै पनि दक्षिणपन्थी धारको उग्र तप्का उग्र दक्षिणपन्थी नारासहित आएको थियो । २४ नोभेम्बर १९९१ को दिनलाई बेल्जियमको इतिहाँसमा ‘कालो आइतबार’ भनिन्छ । त्यसदिनको चुनावमा ‘फ्लेमिश ब्लक’ नामक घोर दक्षिणपन्थी रुढिवादी, नयाँ पार्टीले पहिलो ठूलो विजयको साथ देशमा चुनावी परिदृश्यलाई पुनः परिभाषित गर्यो । त्यो पार्टीले राष्ट्रिय सफलतासँगै एन्टवर्पेनको स्थानीय चुनाव जितेको थियो । तर बेल्जियमको अदालतले त्यो पार्टी नै विघटन गरिदियो ।
त्यही ब्ल्याक आइतबारले बेल्जियमको राजनैतिक क्षेत्रमा सधैंको लागि अभिशप्त छाप छोडेर गएको छ । जसले समय–समयमा आफ्नो रुप र आवश्यक परे रंग फेरेर बेल्जियम समाजलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेको छ । ती दक्षिणपन्थी रुदिवादीहरूको रुचि हमेशा मुलुकको विभाजन, साम्प्रदायिकता र धार्मिक वा भाषिक राष्ट्रियताको नाराभित्र लुकेको हुन्छ । उनीहरूले आप्रवाशी, विदेशी र भिन्न जातिलाई मानसिक रूपले घृणा गर्दछन् । उनीहरूको अनुकुल अवस्थामा त्यो घृणा आक्रामक बन्छ भने प्रतिकुल अवस्थामा रक्षात्मक ।
बेल्जियममा राजनैतिक प्रवाहको अर्को धार हो प्रगतिशील र क्रान्तिकारी धार । यो धारमा पनि दुई खेमा छन्– एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी खेमा र अर्को कम्युनिष्ट खेमा । प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको अन्तिम लक्ष्य सामाजिक संघ–संस्थाद्वारा सञ्चालित समाज अथवा राज्यविहीन समाज (anarchism-Anarchism isapolitical philosophy that advocates self-governed societies based on voluntary institutions. These are often described as stateless societies, although several authors have defined them more specifically as institutions based on non-hierarchical or free associations.) त्यस्तै कम्युनिष्ट धारले साम्यवादमा मात्र आफ्नो लक्ष्य सफल हुने बताउँछ । साम्यवाद भन्नाले बर्गीय उत्पिडनको अन्त्य गर्दै सम्पत्ति, उत्पादनका साधन र राज्यको स्वामित्वमा समान अधिकार र हैसियत प्राप्त विश्व संघ (In political and social sciences, communism (from Latin communis, “common, universal”) is the philosophical, social, political, and economic ideology and movement whose ultimate goal is the establishment of the communist society, which isasocioeconomic order structured upon the common ownership of the means of production and the absence of social classes, money and the state.) समाजवादी यो धारमा बेल्जियमका समाजवादी पार्टी, कामदार पार्टी, इकोलकक वा हरियाली पार्टी र अन्य बामपन्थी पार्टीहरू पर्दछन् । कम्युनिष्ट पार्टी पनि यसमा पर्दछ तर बेल्जियम फ्लामिस सरकारले १९२५ मा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टीमाथि सशस्त्र विद्रोह र हिंसाप्रति झुकाव रहेको भन्दै १९८९ मा प्रतिबन्ध गरेको थियो ।
त्यस्तै रुढिवादी दक्षिणपन्थी धारमा पनि दुइ लक्ष्य निर्धारित पार्टीहरू छन् । आफुलाई न्युट्रल र सुधारवादी धारहरूले आफ्नो अन्तिम लक्ष परम्परागत सुधारवादलाई आफ्नो अन्तिम लक्ष बताएका छन् । उनीहरूले क्रमिक सुधारलाई अगाडि बढाउनुपर्ने मान्यता राखे पनि क्रान्ति वा छलाङबाट आउने परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्दछन् भने उग्र दक्षिणपन्थीहरूले आफ्नो लक्ष्य फासिज्मलाई मान्दछन् । उनीहरूको उद्देश्य नयाँ चुनौती वा परिवर्तनको विरोध मात्र हैन, सबै जनअधिकारलाई राज्यको माताहतमा ल्याएर क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक र जातीय अधिनायकत्व लाद्ने प्रयास गर्दछन् । त्यहाँ फासिष्ट साम्प्रदायिक उद्देश्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, श्रम ऐन, प्रेस स्वतन्त्रता र समान अधिकारको धज्जी उडाइन्छ । तर त्यो सब उनीहरूले आफ्नो अनुकुल अवस्थामा मात्र गर्दछन् । उनीहरूले आफ्नो बर्चस्वमा फासिष्ट उद्देश्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघ, पत्रकार संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र युरोपियन युनियन समेत विघटन गर्न चाहन्छन् । फासिष्टहरूको सांकेतिक रंग पहेँलो हो ।
समाजवादीहरूको अन्तराष्ट्रियतावादी सोचका कारण नै अहिले युरोपमा स्वतन्त्र बजारनीति लागु छ, भातृत्व र मानवताको आवाज अत्यन्त प्रवल छ । हल्याण्ड र बेल्जियमको बिगतको कटुता समाप्त भएर अहिले दुई देशको शिमामा केवल इलो आधारमा पेन्टिङ प्लस बाहेक केही फरक छैन । युरोपभर भातृत्व फस्टाएको छ । तर नाजीका समर्थक र परम्परावादी शक्तिहरूलाई यो पाच्य भएको छैन । यिनीहरूकै कारण अन्धराष्ट्रवादको नाममा रेसिजमले पुन शिर उठाउने खतरा बढेर गएको छ ।
२०१८ को अक्टोबर १४को चुनावपछि बेल्जियमका रुढिवादी दक्षिण पन्थी शक्तिहरूमाथि प्रगतिशील शक्तिहरूको जबर्जस्त दबाब सिर्जना भएको छ । यथास्थितिवादी (राज्य र समाजको मूल स्वरुपलाई बदल्न नचाहाने) शक्तिहरूमध्ये भाम्स बेलाङ अघिल्लो चुनाबभन्दा बढी शक्तिसाली देखिएको छ । जसले बेल्जियममा पुनः राम्रो संकेत गरेको छैन । तर पनि राष्ट्रिय स्थिति अनुदारवादी शक्तिहरूले चिताएजस्तो उनीहरूको पकडमा गएको देखिँदैन ।
अहिलेसम्म भएका समीकरणहरू :
परम्पराबादी अनुदार शक्तिहरू प्रगतिशीलहरूसँग मिलेको उदाहरण बेल्जियममा कमै देखिन्छ । तर मुद्धाहरूको समानता र परम्परावादी सोचका कारण रुढिवादी अनुदार शक्तिहरू आवश्यकताअनुसार मिलेको देख्न सकिन्छ । जस्तै सिडी एण्ड भे र एनभीआ २००७ बाट २०१० र २०१४ सम्म मिलेर शासन चलाएका थिए । कतिपय अवस्थामा ग्रीन र सोसलिष्ट मिलेर सासन शासन चलाएका छन् भने कतिपय अवस्थामा आफूलाई प्रगतिशील र उदार प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउने ‘एमआर’ अथवा भीएलडी पनि समाजवादीहरूसँग मिलेको देखिन्छ ।
यहाँ ‘स्पा’ र ‘ग्रोंन’ समाजवादी भए पनि मार्क्सवादी हैनन् र उनीहरूको लक्ष समाजवाद बताउँछन् । तर कामदारहरूको पार्टी ‘पिभिडीए’ले आफूलाई मार्क्सवादी बताउने गर्छ र साम्यवादलाई आफ्नो अन्तिम लक्ष्य स्वीकार गर्छ । यसको पनि यो पटकको स्थानिय चुनावमा भोटर संख्या बढाएर ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएको छ । हरियाली पार्टीले यो पटकको चुनावमा सबैभन्दा बढी मतदाता बढायो ।
बेल्जियमको स्थापनाकालमा बेल्जियममा मुख्यतया दुई पार्टी अस्तित्वमा थिए । लिवरल पार्टी र क्याथोलिक पार्टीको १९औँ सताब्दीसम्म दबदबा भए पनि त्यसको केही समयपछि लेबर पार्टीको जन्म भयो । अहिलेसम्म पनि बेल्जियमको वालोनितिर प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठुलो देखिन्छ भने भ्लामिस एरियामा भाषिक कन्जरभेटिभ पार्टी एन्भिआको बर्चस्व पहिलो नम्बरमा देखिन्छ ।
Political History of Belgium (by Els Witte/ Jan CareyBeckt/Alain Meynen